Isiqhingi iTangier eMelika siyanyamalala ngaphansi kwamanzi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isiqhingi iTangier e-United States siyanyamalala ngaphansi kwamanzi
Ukubukwa okusemoyeni kweTangier Island.
Isithombe - Tangierisland-va.com
Enye yezinselelo ezinkulu kakhulu zokushisa komhlaba esibhekene nazo ukukhuphuka kwamazinga olwandle ngenxa yokuncibilika kwezigxobo. Njengoba sihlala sibona kubhulogi, kunamadolobha amaningi angacwiliswa ekupheleni kwekhulu leminyaka, njengeVenice, iHong Kong, iBuenos Aires noma iSan Diego, kepha kuneziqhingi esezivele zanyamalala njenge isiqhingi se-tangier.
Itholakala ngasogwini lwaseVirginia, e-United States, isivele ihlushwa ukuguguleka kolwandle. Kusukela ngo-1850 ilahlekelwe izingxenye ezimbili kwezintathu zomhlaba wayo futhi inganyamalala ngokuphelele eminyakeni engama-40 ezayo.
Lesi siqhingi, esisohlwini lweRejista Kazwelonke Yezindawo Zomlando, inendawo engamakhilomitha-skwele angu-2,6. Izakhamizi ezingama-450 zihlala lapha, iningi labo ebelikulesi siqhingi izizukulwane ezimbalwa. Omunye wabo nguCarol Pruitt Moore, oqhamuka kwesinye sezihlobo zakudala zabadobi.
Ngaleso sikhathi, kwamthatha ihora ukuhamba lesi siqhingi ukusuka ekugcineni kuze kube sekugcineni; manje kuthatha imizuzu eyishumi kuphela. "Ukungamlondolozi uTangier kungaba yinhlekelele," utshele iThe CNN. Into ehlekisayo ukuthi abantu abaningi kule ngxenye encane yomhlaba bayameseka uMengameli waseMelika uDonald Trump uma ethi ukuguquka kwesimo sezulu akudalwa ngabantu. Ingqikithi, uthole amavoti angama-87% esiqhingini.
UDavid Schulte, isazi sezinto zasolwandle kanye ne-US Army Corps of Engineers, ucabanga okuhlukile: ukufudumala kwembulunga yonke kusheshisa ukuguguleka kweTangier. "Manje amanzi asephakeme ngokwanele ukuthi angaba namandla ngaphezu kocingo lwesihlabathi esinesihlabathi," esho.
Ngokungafani nezinye iziqhingi, ITangier igquma lesihlabathi elicwilile. Inomhlabathi wobumba ophilayo kepha uthambe kakhulu, ngakho-ke uma amanzi engawushaya ngqo, akwenzayo empeleni ukuwudwengula ube yizicucu. Ngakho-ke, kancane kancane, iyanyamalala njengoba ubona kule vidiyo:
Kungakhathalekile ukuthi izakhamuzi zinamiphi imibono ngokushintsha kwesimo sezulu, wonke umuntu uyavuma ukuthi kumele kwenziwe okuthile ukuvimba ukuguguleka kwenhlabathi. Njengoba ibhekene nalesi simo, iMeya uJames Eskridge ifuna yakha udonga olusha ukuvikela bona. Kepha ukubona ukuthi iphrojekthi iba ngokoqobo kuthatha iminyaka.
Okwamanje, akuthathi ngaphezulu noma ngaphansi kuka-20 Ngaleso sikhathi »kube nokuguguleka okukhulu kakhulu kangangokuba umsebenzi wokuqala ubungeke usebenze»Waphawula.
Sizobona ukuthi kwenzekani.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Isiqhingi iTangier e-United States siyanyamalala ngaphansi kwamanzi
Ucwaningo lwaseCanada lokushintsha kwesimo sezulu lukhanseliwe ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu
Ezolimo zokongiwa kwemvelo, umkhuba omuhle kakhulu wokulwa nokuguquka kwesimo sezulu